Qaraxyo ka dhacay Asmara & Colaada Itoobiya oo gaartay Eritrea | KEYDMEDIA ONLINE
Qaraxyo culus ayaa laga maqlaayay caasimadda dalka Eritrea ee Asmara, maalmo kadib hanjabaad ka timid Mas'uuliyiinta gobalka Tigreyga.
ADDIS ABABA, Itoobiya - Collaadda Itoobiya ayaa gaartay Asmara, waxaana Asmara ka dhacay galabta iyo caawa dhowr Qaraxyo, kadib markii shalay saraakiil ka soo jeeda gobalka Tigreyga ee dalka Itoobiya ay ku hanjabeen in ay weerari doonaan dalka dariska.
Maamulka gobalka Tigreyga ayaa xukuumadda Isaias Afwerki ku eedeynaya in uu la saftay Ra'isul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Inkastoo ay adagtahay in macluumaad laga helo dalka Eritrea, hadana wararka ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac.
Sidee ku bilaabatay Colaadda?
0 Comments Topics: eritrea itoobiya tigray
Warar 15 April 2021 12:26